तपाईं किन ब्लग गर्नुहुन्छ? | Martech Zone
तपाईं किन ब्लग गर्नुहुन्छ?
सोमवार, जुलाई 31, 2006 मङ्गलबार, अक्टोबर 4, 2011 Douglas Karr
म जानकारी खोज्न र पास गर्न चाहन्छु। मसँग परिवार, साथीहरू, सहकर्मीहरू र ग्राहकहरू छन् जुन मेरो रायको लागि सोध्छन् र म तिनीहरूलाई यो दिन चाहन्छु। दुर्भाग्यवश मसँग धेरै प्रश्नहरू छन् र मद्दतको लागि अधिक व्यक्तिहरू छन्, यद्यपि कहिलेकाहिँ मेरो परिवार पनि पागल हुन्छ कि म प्रतिक्रिया दिँदिन।
तर, यो is के म मा राम्रो छु।
मलाई सुन्न मन पर्छ।
मलाई पढ्न मन पर्छ।
मलाई सिक्न मन पर्छ।
र, मैले सिकेको कुरा साझा गर्न मन पराउँछन्।
साझा गर्न अझ महत्त्वपूर्ण छ जब म गलत छु। जब मानिसहरूले मलाई भन्छन् कि म आफ्नो बडबडबाट टाढा छु तब म यसको कदर गर्छु। आज म आफ्नो जिम्मेवारी र मेरो काम को सीमा को बारे मा काम मा एक भावुक झगडा मा मिल्यो। सत्य यो हो कि यो झगडा हो किनभने म सीमालाई घृणा गर्दछु। मलाई मेरो टोली चाहन्न र म मेरो काम केको बारेमा बहस गर्दै उनीहरूको काम के हो। म वास्तवमै प्रमुख समस्याको समाधान गर्नका लागि टाउकोको समूह लिन चाहन्छु! त्यो हो!
एक कम्पनी मा तनाव को समयमा, हामी जिम्मेवारी र सीमा पछाडि धकेल्न चाहन्छौं। के यो हास्यास्पद छैन कि जब तपाईं एक कम्पनी शुरू गर्नुहुन्छ कि ती सीमाहरू अवस्थित छैन? सबैजना केवल मा लात मा किनभने तिनीहरू सबै छ यदि तिनीहरू बाँच्न चाहन्छन् भने।5देखि १० देखि clients,००० ग्राहकहरूसम्म बढ्दै जाँदा हामी कसरी त्यो गति राख्न सक्छौं? मलाई लाग्छ कि यो ठूला कम्पनीहरूको एक उत्तम राखिएको रहस्य हो। प्रक्रियाहरू, कागजी कार्यहरू, पोइन्टि। औंलाहरूसँग हेक गर्न ...। बस यो गरौं! यसैले म व्यापारमा छु र राजनीतिमा छैन। म राजनीतिलाई घृणा गर्दछु, विशेष गरी व्यापारमा राजनीतिलाई।
यसैले मैले चिच्याएँ, र तिनीहरूले कराए, र मैले केहि चिच्याएँ र आँधीबेहरी बाहिर निस्के। पछि, हामी यसलाई पार गर्यौं। हामी यसको कारणले गर्दा राम्रो टीम हौं। के म इच्छा गर्दछु यो कहिले पनि भएको थिएन? पक्कै पनि होइन! उनीहरूले बुझ्नु पर्छ कि म कस्तो महसुस गर्छु र म को हुँ त्यसैले हामी काम सही तरीकाले प्राप्त गर्न सक्दछौं। म तिनीहरूलाई पछि धकेल्न को लागी धेरै सम्मान गर्दछु। र अब म तिनीहरूको परिप्रेक्ष्य को लागी एक कदर छ।
म सबैसँग यी बहसहरू गर्न चाहन्छु। म एक राम्रो व्यक्ति हुँ जब तपाईं मसँग आफैलाई व्यक्त गर्नुहुन्छ। मँ भन्दिन कि म सही छु वा तपाईं गलत हुनुहुन्छ ... हामी प्रत्येकको आफ्नै दृष्टिकोण र विश्वास छ। हाम्रो विविधताका कारण हामी टीमको रूपमा राम्रो छौं।
यसैले मैले ब्लग गरे!
म मेरो विचारहरू जो कोहीलाई पनि पढ्न मन पराउँदछन्। मसँग अहिले दिनको दुई सय पाठकहरू छन् र हरेक केही दिनमा उनीहरूमध्ये एकले मलाई टिप्पणी वा छोटो नोट दिनेछ जसले मलाई के लेख्यो भनेर सोच्न बाध्य तुल्याउँछ। हिजो, एक सम्मानित GIS कम्पनी को नेता गुगल नक्सा मा मेरो अन्तिम प्रविष्टि को बारे मा2शब्द पारित: "राम्रो कार्यान्वयन!"। यो मेरो दिन बनायो!
यसैले मैले ब्लग गरे।
म वरिपरि विश्वसनीय मान्छे को एक समूह छ कि म निरन्तर विचारहरु को बंद छ। तर यो पर्याप्त छैन। म मेरा विचारहरू व्यक्तिहरूलाई चिन्न बाध्य गर्न चाहान्छु जो म जान्दिन। मेरो उद्योग बाहिरका मानिसहरू, मेरो देश बाहिर, मेरो जाति बाहिर, आदि। म तिनीहरूको प्रतिक्रिया स्वागत गर्दछु! म वास्तवमै गर्छु! हामी एक अर्कालाई बुझ्ने बित्तिकै राम्रो हुन्छौं। कुनै कुराले हामीलाई रोक्न सक्दैन।
त्यसोभए तपाईं किन ब्लग गर्नुहुन्छ?
गुगल नक्शा एपीआई: खोज्नुहोस्, तान्नुहोस् र मेरो स्थान अपडेट गर्नुहोस्
प्रकोप मार्फत कर्पोरेट ब्लगि ((यो खुला हुँदैछ)
अगस्ट,, २०१ 1 2006:२१ अपराह्न
मैले भर्खर यस ब्लगलाई आज फेला पारे र मैले यो भन्नै पर्छ कि यो मेरो समान ब्लगको रूपमा उत्कृष्ट पोष्टहरू सहित उत्कृष्ट लाग्छ। म तपाइँको काम को अधिक पढ्न को लागि तत्पर!